Vashandi veHurumende Votsamwiswa neMari Dzavanotambira
Vashandi vehurumende vanonzi vari kuburitsira hurumende makano mushure mekunzwa kuti havasi kuzowedzerwa mari dzemihoro nezvikamu zvavanga vakatarisira.
Kunyunyuta kwevashandi vehurumende uku kunotevera mashoko ekuti mauto akawana mapayslip avo neChipiri, asi pasina mari dzavanga vachitarisira. Zvinonzi mari dzakawanikwa dziri pama payslip dziri pakati pe$193.00 ne$220.00.
Izvi zvinonzi ndizvo zvaita kuti vamwe vashandi vehurumende vagare vanyunyuta kunyange hazvo vasati vawanawo ma payslip avo.
Vashandi ava vanoti gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vakanga vavavimbisa kuti vachawedzerwa mari dzavo gore rino.
Vachiparura chirongwa chemashandisirwo emari gore rapera, VaBiti vakawedzera mari inoshandiswa nehurumende kubva pamazana manomwe emamiriyoni emadhora kusvika pabhiriyoni nemazana mana ezviuru zvemadhora. Asi VaBiti havana kubuda pachena kuti vashandi vachawedzerwa nemariii mugore rino, kungange hazvo mapazi ehurumende akawedzerwa mari dzeckushandisa pagore.
Vashandi vehurumende vanoti vari kuda kutambiriswa mari dzinoenderana nePoverty Datum Line, iyo iri pa$502.00 pari zvino.
Vamiriri vevashandi vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende neChina kuitira kuti vazeye nyaya dzemihoro.
Sangano revarairidzi re Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzisashanda kusvika dzanzwa zvichabuda mumusangano weChina.
Sangano reZimbabwe Teachers Association, Zimta, riri kutiwo nhengo dzaro dzicharamba dzichienda kubasa kusvika dzanzwa zvinobuda muhurukuro.
Masangno ePTUZ neZimta anogara akapesana pamaitiro nguva zhinji, kunyange hazvo pane dzimwe nguva achimboitawo chirwira ingwe.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumauto kuti anotorawo seyi nyaya yekusawedzerwa kwemari idzi.
Sachigaro weApex Council, Amai Tendai Chikowore, vanoti vachapinda munhaurirano dzemihoro vachitangira pavakasiira gore rapera. Apex Council yakaita musangano nevamiriri vehurumende muna Zvita asi hapana chakabuda mumusangano uyu.